Ndị na -ebubata ihe nke igwe na -emepụta ihe na ụlọ ọrụ - China Metal & Glass Hookah Manufacturers
Ọla & Glass Hookah
Nri ụtọ Hookah
Ọ dị mfe ijikwa mkpịsị aka mkpịsị aka Hookah
Aluminom Ihe Foil
Ọdịdị Snake nke Aluminom Anụmanụ Hookah
N'ogbe Yi Stock anwụrụ anwụrụ
Ọkpụkpọ Ọkụ Ọkụ nke Anwụrụ ọkụ adịghị
Hazie Shisha Bowl
Ọkụ eletrik Hookah Unyi Ọkụ
Akụkụ okomoko Square LED Function Hookah
Okomoko Glass Hookah SY1010
Okomoko Aluminom Glass Hookah YH-SYAL12
Nnukwu Hookah Glass Glass
Ọnụ ego AK47
Shisha Shisha Acrylic Aluminom Tall dị ogologo
Lemon Agba ogologo Glass Hookah
Nlereanya Mba.: YH-SY0806
Ogologo ngwaahịa: 16*70CM
Ihe: Glass+aluminum alloy
Agba: Otu dị ka foto
Ngwugwu: onyinye onyinye
Ogo katọn: 68*62*60cm/24kgs
Ejiji Dị Mfe Dị Mfe
Nlereanya Mba.: YH-SY9122BL
Ogo ngwaahịa: 20.6*61CM
Ihe: iko+igwe anaghị agba nchara+alloy aluminom
Ogo katọn: 66.5*45*34.5cm/21kgs
Akụkụ niile nwere ike hazie dịka faịlụ nhazi.
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọnụahịa ya dị ala karịa 10% karịa ahịa,
nabata ịjụ anyị ajụjụ!
Nlereanya Mba.: SY0133
Ebu ibu 48*48*52cm/18kgs
Igwe na -acha odo odo nwere Hookah
Nlereanya Mba: YH-SY0722
Ogologo ngwaahịa: 11*34CM
Ogo katọn: 44.5*44.5*37.5cm/14.5kgs
Obere obere Shisha
Nlereanya Mba: YH-SY0511
Ogo ngwaahịa: 10*29CM
Ogo katọn: 50.5*38*58.5cm/26kgs
Hookah okomoko na ụcha ukpa
Nlereanya Mba.: YH-SY0809
Ogologo ngwaahịa: 22*53CM
Ogo katọn: 68*56*34cm/16.5kgs
Kedu otu esi amalite ịtụ?
Ị nwere ike pịa "Nyocha ugbu a" iziga ajụjụ, anyị ga -azakwa gị site na email n'oge na -adịghị anya (Mọnde ruo Fraịde, zaghachi n'ime awa 12; ngwụsị izu, zaghachi n'ime awa 24)
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe akara: ị nwere ike zitere anyị foto ma ọ bụ ihe nlele maka nhazi. Anyị nwere ndị otu ọkachamara nke ndị nrụpụta na ndị na -emepụta ụkpụrụ ga -enye gị atụmatụ na nkwupụta ngwa ngwa. Ọtụtụ mgbe oge nlele maka nkwakọ ngwaahịa omenala bụ ụbọchị 3, oge maka ịlele ngwaahịa bụ ụbọchị 5-7. Ọ nwere ike iwe ogologo oge ma ọ bụrụ na enwere usoro pụrụ iche.
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ahịa na-ere ahịa: ọtụtụ hookahs plastik dị na ngwaahịa, anyị na-akwado akara ngosi ahaziri iche na obere obere ngwongwo (ihe karịrị otu igbe). Maka hookahs ọla, ịkwesịrị ịkpọtụrụ anyị ka anyị gosipụta ngwaahịa ahụ.
Ajụjụ: you na -akwado otu mbupu sitere n'ụlọ nkwakọba ihe esenidụt?
A: Anyị na -akwado ụlọ nkwakọba ihe esenidụt na United States na Russia. Ọ bụrụ na iwu ahụ na -ezute ọnụ ọgụgụ kacha nta, anyị nwere ike iziga ngwongwo n'ụlọ nkwakọba ihe esenidụt maka gị.
Ajụjụ: Enwere m ike ịhazi akara m
A: Mgbe ọnụ ọgụgụ ịtụ ahịa gị ruru ihe karịrị 100, anyị nwere ike hazie gị akara ngosi.
Ọ bụrụ na achọrọ nnyefe ọkụ, ọnụọgụ ọnụọgụ kwesịrị iru 500.
Ajụjụ: Ị nwere ike ịme ngwaahịa ọhụrụ dịka eserese eserese
A: Ee, anyị nwere ndị nrụpụta ọkachamara ka ha na gị jikọọ, ị nwere ike ịnye nlele ma ọ bụ eserese iji hazie ngwaahịa
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka m ga -enweta ngwaahịa a ka m nyechara iwu
A: Anyị nwere ụlọ nrụpụta abụọ, nnyefe ngwongwo dịkwa ngwa ngwa. Ọtụtụ mgbe oge nnyefe ahaziri ahazi bụ ụbọchị 7-30, oge nnyefe ngwa ahịa bụ ụbọchị 3. Mgbe emechara, anyị na -ebukarị ụgbọ mmiri ngwa ngwa, ị ga -enweta ngwongwo n'oge adịghị anya.
Ajụjụ: Enwere m ike ree ngwaahịa gị n'elu ikpo okwu ọ bụla?
A: Ee, ngwaahịa anyị nwere akwụkwọ ikike, ị gaghị enwe ihe egwu nke ịda iwu
Glass + Zinc Alloy okomoko Hookah
Nlereanya Mba.: YH-SY0802
Ogo ngwaahịa: 78CM
Ihe: Glass+iron+alloy zinc
Ogo katọn: 65*45*50cm/18kgs
Ụlọ Eiffel Ekebere Shisha
Nlereanya Mba.: RY005
Nkwakọ ngwaahịa: 16*16*39cm
Ogo katọn: 68*52*41CM
Igwe anwụrụ ọkụ na -acha ụcha
Nlereanya Mba.: GRS-6916
Ogo ngwaahịa: 50*38mm
Ogo katọn: 41.5*35.5*33cm
Bọbụ Ọdịdị Glass Hookah
Nlereanya Mba: YH-WY0804
Ogologo ngwaahịa: 16*73CM
Ọmarịcha Shisha Bowl
Nlereanya ： Mba TC05
Ogologo ngwaahịa a ： 12.5mm
Ihe ： seramiiki
arọ ： 0.24g
Ngwugwu box onyinye onyinye
PC/CTN ； 60pcs
Ogo katọn: 42*33.8*39.5cm
Aluminium Silicone Hookah sooks
Size: ogologo aka 250mm, ogologo isi 59mm, ogologo ahịrị 120-200mm hazie
Ngwugwu: opp akpa /blisigbe/agba
123 Ọzọ> >> Peeji nke 1/3
N'IHI gịnị họrọ anyị
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na -emepụta ngwaahịa klaasị mbụ ụwa na ịgbaso ụkpụrụ
nke ịdị mma mbụ. Ngwaahịa anyị enwetala ezigbo aha na ụlọ ọrụ yana ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ..
Ụlọ 5-1, Owuwu A, No.777 Zhongguan West Road, Zhenhai Mpaghara, Ningbo, Zhejiang, China